Wuxuu ahaa ruux yaab leh!
Monday 12th October 2020 08:14:46 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
RW Cali Khaliif Galaydh oo safar ku maraya Djibouti ayaa waxaa si kedis ah looga keenay mooshin uu xilkiisi ku waayay October 28, 2001
. Waxaa laga waraystay BBC, waxay dad badani la yaabeen ammaanta uu huwiyay Guddoomiyihii Baarlamaanka ee ku dhawaaqay xil ka qaadistiisa AUN Cabdalla Deerow Isaaq, wuxuu xil ka qaadistiisa ku sheegay in uu yahay go'aan Cabdiqaasim, oo la fulin waayay asagoo xaadir ah, oo la la sugay illaa uu ka safro.
Maalintaasi waxay ahayd Axad. Idaacadaha Muqdisho sida Horn Afrik, Banaadir iyo STN, waxaa laga baahiyay hadalo kul kulul oo ay is dhaafsanayaan xildhibaanada. Doodda dowladnimo, ee ku cusbeyd dalka awgeed, dad badan ayaa la yaabannaa sabab xildhibaanada Daarood ay ugu ololeynayeen mooshinka, halka kuwa Hawiye ee hadlaya ay Dr. Galaydh u difaacayeen. Xil walaal ka-ridasha aad loo ma aqoon.
Xildhibaanno kale oo labada beelood aan ahayn ayaa sidoo kale ka mid ahaa dhinacyada doodda. Xildhibaan Cabdiraxmaan Ibbi oo ahaa xildhibaan doodaha aad uga muuqday ayaa RW. Cali Khaliif ku eedeeyay inuu musuq baahsan ku kacay, iyo inuu gabay doorkiisa dib u heshiisiinta. Marka faahfaahinta musuqa la weydiiyay xildhibaanada qaar waxay sheegeen in 1,600 oo taleefanno Nokia ah uu dad gaar ah u qeybiyay, oo lagu qiyaasayo in lacag nus milyan la badan ay ku baxday.
Doodaha socday waxaa ka mid ahaa in xukuumadda ay ka gaabisay dib u heshiisiinta. Eeddaas waxaa xoojinayay is casillaaddii RW hore Cabdirisaaq Xaaji Xuseen oo ku magacawnaa Guddoomiyaha guddi dib u heshiisiin, oo 25 xubnood ka koobnaa.
Dr. Galaydh wuxuu dhisay xukuumad, oo uu wasiirkeeda arrimaha dibadda ahaa Ismaaciil Buubaa. Madaxweyne Cabdiqaasim wuxuu sheegay in uu Somaliland siiyay RW, iyo wasiiro muhiim ah oo uu Buubaa ku jiray. Madaxweyne Cigaal oo waraysi siiyay wargeys ka soo baxa South Africa ayaa qiray doodda Cabdiqaasim, balse sheegay in xil la siiyay qof Somaliland ah iyo qaddiyad ay kala duwan yihiin.
Maalmo kor inta aan xilka laga qaadin, 19 October 2001, Dr. Galaydh wuxuu la kulmay beesha caalamka, sida David Stephen oo uu ka codsaday in lagu kaalmeeyo howl-gal nabad ilaalin. Xantu waxay ahayd in madaxweyne Cabdiqaasim uu diidanaa.
Xiligaasi adduunku is bedel weyn baa ka dhacay oo uu sababay weerarkii Twin Towers ee Sept 11, 2001. Soomaaliya waxay ka mid ahayd waddamo la hadal hayay in ay argagixiso ku dhuumaalaysanayso, Itoobiyana waxay sheegaysay in baarlamaanka iyo madaxweynaha Soomaaliyaba ay kooxo diimeed yihiin. Dr. Galaydh wuxuu sida afyaheenka xukuumad oo kale la hadlayay warbaahinta caalamka si uu uga difaaco Soomaaliya eedeymahaas.
Dr. Galaydh muddadii koobneyd ee uu RW ahaa wuxuu ka badbaaday ugu yaraan 2 weerar. Mid lagu qaaday hotelka Ramadaan oo uu degannaa March, 2001, iyo mid ka dhacay Belidoogle oo ahaa isla horaantii 2001.
Wuxuu ka tagay taariikh culus, wuxuu ahaa aqoonyahan, khabiir dowladeed, Prof. jaamacadeed, oo ka mid ahaa Soomaalidii fara ku tiriska ahayd ee Maraykan PhD ka qaata 1960-70-meeyadii.
Wuxuu geeriyooday October 8, 2020, Ilaahay ha u naxariisto RW Cali Khaliif Galaydh. Maalmaha iyo bilaha mararka qaarkood si bay isugu aadaan, laakiin middani waa wax kale. Wuxuu ka tagay raadad kala duwan, taariikho kala duwan, oo haddana isku waqti ku soo aaday.
Isla maanta uu geeriyooday oo kale, October 8, 2000 ayaa madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan wuxuu Dr. Cali Khalif Galaydh u magacaabay RW. Sida aan taariikhda ku arkay wuxuu dhashay October 14, 1941, baarlammaanka Soomaaliyana wuxuu xilka ka qaaday October 28, 2001.
Maanta dalka waxaa ammaankiisa ilaaliya ciidamo nabad ilaalin; wuxuu ahaa fikirkii Dr. Galaydh uu soo jeediyay 20 sanno ka hor ee uu xilkiisa ku waayay.
W/Q Hassan Adam hasow
Mudahaarad Lagaga Soo Horjeedo Kufsigii Cawo Xariir Oo Burco Ka dhacay & Madaxweyne Biixi Oo Fariin Loo Diray [ Muuq
Israa'iil Oo Haddiyad Yaab Leh Sudan Ugu Beddeshay Xidhiidhka Ay La Yeelatay [ Gudaha Ka Akhriso ]
Maxaa Baajiyey Safarkii Madaxweynaha Somaliland ee Laascaanood ku iman lahaaa todobaadkan , Qiyaastayda 4 Qodob
Duqeyn Lala Beegsaday Dugsi Qur'aan Oo Lagu Dilay 12 Ruux Dalka Afghanistan.
Koox Burcadda Internet-ka Ah Oo Qaab La Yaab Leh Lacag Ugu deeqa hay'adaha gargaarka.
Duuliyihii Diiday Inuu Hargeysa Duqeeyo Oo Habeenkii Xalay Ahaa Hargeysa Lagu Maamuusay